भिजिट भिसामा महिलामाथी कडाइ, परिवारको सहमति र वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य! - Malayakhabar
होम पेज देश समाचार भिजिट भिसामा महिलामाथी कडाइ, परिवारको सहमति र वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य!
भिजिट भिसामा महिलामाथी कडाइ, परिवारको सहमति र वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य!
काठमाडौं := अध्यागमन विभागले एक्लै विदेश भ्रमणमा जाने महिलाहरूको लागि कार्यविधि संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। विभागले अध्यागमन कार्यविधि २०६५ को भिजिट भिसासम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयमा पठाएको हो।
अघिल्लो लेख म्यानमारमा सैन्य ‘कू’ को विरोधमा प्रदर्शन जारी।
पछिल्लो लेख सेभियासँग बार्सिलोना पराजित।